Religion | Ainmat.com - Myanmar Blog
Author : kyawkyaw2 - Thursday, May 12. 2011
စေတီတော်အား လက်ယာရစ်ပတ်၍ ဖူးမြော်ကြည်ညိုရင်း လျှောက်လှမ်းလာခဲ့ရာ ရင်ပြင်တော် တစ်နေရာအရောက်တွင် ဆုတောင်းသလို လို၊ မန္တန်ရွတ်သလိုလို ထူးခြားသောလေယူလေသိမ်းဖြင်...
Categories : Buddism , Comments :
Defined Tags : ဘာသာရေး
Author : electric - Thursday, October 7. 2010
မွန်းကျပ်ပိတ်ဆိုထားသောစိတ်အစဉ်ကို..အရှေ့အရပ်မှရင်ကော့ကာထွက်ပေါ်လာသောသူရိယနေ မင်းကြီးနှင့်အတူ…………………. အနောက်သို့ခြေလှမ်းအနည်းငယ်လျှောက်၍အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်သို့တက်လာခဲ့သည်..ဆိုင် တည်နေရာမှာအနိမ့်ပိုင်းဖြစ်၍ (မွတ်စလင်မ်လူငယ်တစ်ဦး၏ကိုယ်တွေ့ခရီးသွားအတွေးအမြင်များကိုသဘောရိုးဖြင့်အမှန်အတိုင်းတင်ပြထားပါသည်……အပြုသဘောဆောင်ကာဖက်ရှုကြပါကုန်)
Categories : Religion , Comments :
Author : Ainmat... - Wednesday, June 16. 2010
Categories : Buddism, Essay, Poems , Comments :6Comments
Author : manawphyu - Thursday, April 22. 2010
Categories : Religion , Comments :2Comments
Defined Tags : Religion
Author : Han Kyi - Sunday, April 4. 2010
ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ တရားသံပေါက်ကဗျာလေးပါ။ ငယ်ငယ်က မိဘတွေနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းသွား သီလယူကြတော့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်တိုင်ပေးတာ လိုက်ဆိုရင်းနဲ့အလွတ်ရနေတယ်။ တရားသံဝေဂရစရာ ကဗျာလေးပါ။ ဖတ်လေ၊ တွေးလေ၊ အရသာရှိလေပါပဲ။
Categories : Buddism , Comments :2Comments
Defined Tags : Buddism
Author : kyawkyaw2 - Friday, January 29. 2010
ယခုခေတ်ကြီးမှာ နေရာတကာ ဝေဖန်ရေးဆရာတွေ သိပ်ပေါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝေဖန်မှုတစ်ခုသာရှိပြီး ယုံကြည်မှု သဒ္ဓါတရားမပါလျှင် မိစ္ဆာသဘောတရားတွေ ကိန်းနေတတ်တယ်။
ယုံကြည်မှု သဒ္ဓါတရားလည်း အားကောင်းတယ်၊ ချင့်ချိန်ဝေဖန်မှု အသိဥာဏ်ပညာလည်း ကြွယ်ဝတယ်။ အဲဒီလို သဒ္ဓါ၊ ပညာ နှစ်ဖြာမျှတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ဖို့
Categories : Buddism , Comments : 1 Comment
Defined Tags : Buddism, ဘာသာရေး
Author : kyawkyaw2 - Thursday, January 7. 2010
ဒီအတိုင်းဆို ခင်ဗျားတို့က ဒီရုပ်တုရှင်ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာအဆင့်ကိုလည်း ဘာမှမသိဘဲ ပူဇော်စရာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး လို့ သတ်မှတ်ကြတာကိုး၊ လည်ပင်းမှာ ပုတီးချိတ်ထားတာမြင်တိုင်း သူတော်စင်လို့သတ်မှတ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့
The 100 A Ranking of the Most Influential Persons in History by Michael H. Hartအပိုင်း(၂)
Author : electric - Thursday, December 24. 2009
ကုရ်အာန်ကိုရေးထားတဲ့ ဘာသာစကားဟာ အာရဗ်ဖြစ်တာနဲ့ပဲ အာရဗ်ဒေသစကားတွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်
တစ်ထောင့်လေးရာအတွင်းမှာ တစ်နယ်နဲ့တစ်နယ်စကားပြော မပေါက်ပေါက်အောင်၊ ပွားများမလာအောင်
The 100 A Ranking of the Most Influential Persons in History by Michael H. Hartအပိုင်း(၁)
ကျော်စွာတစ်ရာထဲက Micheal H.Hart ရဲ့ကိုယ်တော်မြတ်ပေါ်...အမြင်ပါ။
July 22, 2009 by dreamtrader786
Author : kyawkyaw2 - Saturday, December 12. 2009
ကျွန်တော့်ကို မေးရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး ကိုလင်းရဲ့၊ ခင်ဗျားမှာလည်း မွေးရာပါဦးနှောက်ကြီးတစ်ခုလုံး သန်သန်စွမ်းစွမ်းရှိ နေရဲ့သားနဲ့ဗျာ၊ ခင်ဗျာ့ဦးနှောက်က ပန်ကာအောက်မှာအနေကြာလို့ ဈေးအကြီးဆုံးဖြစ်သွား ပြီလားတော့ မပြောတတ်ဘူး
Author : electric - Saturday, December 12. 2009
မြန်မာ့အသံမှ အသံလွှင့်သည့်နေ့။ ။၂၂-၁၂-၁၉၅၀
Author : electric - Friday, December 11. 2009
Categories : Religion , Comments : 1 Comment
Page6of 6, totaling 65 entries